Wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda Tukaraq iyo dhaqdhaqaaqyada oo sii kordhay – Shabakadda Puntland FM
You are here: Home WARARKA MAANTA Wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda Tukaraq iyo dhaqdhaqaaqyada oo sii kordhay
Wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda Tukaraq iyo dhaqdhaqaaqyada oo sii kordhay
Wararka naga soo gaaraya furimaha ay isku horfadhiyaan 4ii bilood ee lasoo dhaafay ciidamada maamulada Puntland iyo Somaliland ayaa sheegaya in xiisadda colaadeed ay hadda gaartay heerkii ugu sareeyey.
Laga soo bilaabo galinkii dambe ee Salaasadii shalay ilaa maanta furimaha hore ee dagaalka ayay aad iskugu dhawaadeen ciidamadu, waxaana cabsidu ay korortay markii ay kordheen joogitaanka Milaterigu.
Goobjoogayaal madax banaan ayaa u sheegay Puntlandtimes.com in labada dhinacba u muuqdaan kuwa u diyaar garoobay dagaal maalmo iyo bilaba qaadan karra, kaas oo lagu loolamayo gacan kuheynta gobalka Sool.
Sarkaal sare oo katirsan ciidamada Difaaca Puntland ayaa u sheegay PuntlandFM.com in ay ciidamadoodu tagi doonan dhamaan deeganada gobalka Sool, waxaana ay horey Puntland ugu hanjabtay in ay lawareegayso magaalada Laascaanood.
Somaliland wey ka gaabsadeen dhaqdhaqaaqyada cusub, waxaase ay u muujiyeen PuntlandFM.com in ay welwel ka qabaan dagaal dhaca, Gudoomiyaha gobalka Sool ee Somaliland Cabdikheyre oo diiday in uu wareysi bixiyo ayaa haddana si kooban ugu sheegay in ciidamadooda ay dagaalamagaan, waa sida uu sheegaye.
QM ayaa ka welwelsan xaaladda Tukaraq, waxayna sheegtay in ay kubarakaceen 12kun oo Qoys, taas oo ka dhigan in ay guryahoodii kabaxeen 40,000 kun oo qof.